Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Oganda » Mampitsahatra ny diany ho any India i Uganda
Ny governemanta Ogandà dia nandrara ny fitsangatsanganana tany India sy ny fiverenany mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny taorian'ny firongatry ny aretina COVID-19 sy ny fahafatesany tany amin'ny kaontinanta kontinanta.
Taorian'ny firongatry ny tranga COVID-19 nitranga tany India, i Uganda dia nanakana ny fitsangatsanganana rehetra sy ny fivoahana ny firenena.
Fly Emirates sy Kenya Airways izay manidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Entebbe any Oganda dia nanambara fepetra mitovy amin'izany.
Na inona na inona zotiny, ny mpandeha rehetra izay mety efa tany India na namakivaky an'i India tao anatin'ny 14 andro lasa dia tsy avela miditra ao Oganda.
Izany dia nambaran'ny minisitry ny fahasalamana (MOH), ny faran'ny herinandro, Dr. Jane Ruth Aceng, taorian'ny tranga voarakitra voalohany momba ny virus coronavirus tany India.
Tany am-piandohan'ny herinandro dia nanambara fepetra mitovy amin'izany ny Fly Emirates sy Kenya Airways izay manidina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Entebbe, herinandro lasa teo.
"Ankoatry ny fepetra fanaraha-maso COVID-19 efa misy, ny mpandeha sy ny mpandeha rehetra avy any India dia tsy avela miditra ao Oganda manomboka amin'ny misasakalin'ny 1 Mey 2021," hoy izy.
Tsy jerena io làlan'ny dia io. Ho fanampin'izay, ny mpandeha rehetra izay mety ho tany India na namakivaky an'i India tao anatin'ny 14 andro farany na inona na inona zotram-pitaterana dia tsy avela miditra ao Oganda.